गजुरेलको बिहेको खबरपछि ए”क्कासि मिडियामा आइन मीना ; लगाइन ग*म्भीर आ”रोप(भि”डियो सहित) – ABC NEWS 24
गजुरेलको बिहेको खबरपछि ए”क्कासि मिडियामा आइन मीना ; लगाइन ग*म्भीर आ”रोप(भि”डियो सहित)
चर्चित हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलले पुनः विवाह गर्न लागेको कुरा स्वीकार गरेका छन् ।
एपी.वान. टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रममा तमसोमा ज्योतिर्गमयमा दिएको अन्तरवार्तामा गजुरेलले आफुले चाँडै नै विवाह गर्न लागेको जानकारी गराएका हुन ।केही समयअघि श्रीमती मिना ढकालसँग गजुरेलको पारापाचुके भएको थियो । यद्यपि गजुरेलले अहिले कोसँग विवाह गर्न लागेको भनेर खुलाएका छैनन् ।
अन्तरवार्तामा उनले भनेका छन्, ‘चाँडै नै तपाईहरुको शुभकामना, सुझाव सल्लाहअनुसार मैले मेरो जीवनमा कोही साथी जोड्दैछु अथवा हामी जोडिदै छौं । अहिलेलाई मैले यति मात्र भनेँ ।’
जब मनोज गजुरेलको यो अभिव्यक्ति भाइरल हुन पुग्यो तब यसले गर्दा समाजिक संजाल देखि लिएर विशेष गरी उनकी पुर्वपत्नीलाई यस्तो असर गम्भीर परेको देखिन्छ । मनोजको विवाहको कुरा सुनेर उनकी पुर्वपत्नी मीनाले अनेकौं आरोपहरु लगाइरहेकी छिन ।
पछिल्लो समय मीनाले फेसबुक मार्फत स्टाटस लेख्दै यस्तो भनेकी छिन;- छि- “छि ! अन्तिम निर्णय हो भने,अती नै गलत र गैरजिम्मेवार पुर्ण निर्णय हुनेछ । कलिला भर्खर हुर्किदै गरेका साना छोराछोरी माथी अ’न्याय हुन्छ फेरि त्यही चार भि’त्ता भित्र।। सधै ग’लत निर्णय लिदै गर्दा समाज,छिमेकमा शिर ठाडो पारि बाच्न गार्हो हुन्न र ? खो’क्रो आडम्बर…..
← खातामा बैंकले झुक्किएर ३१ करोड हालिदियो, यि युवतीले सबै पैसा खर्च गरिदिएपछि बैंक जिल्ल!
दु:खद खबर कमाउन गएको छोरो उतै अस्तायो ,हार्दिक श्रद्धाञ्जली →